China China steel stainless sheets zokwenza kunye mveliso | IHuaxiao
Umthamo weSino Stainless ngee-Sheet zentsimbi, i-Bright Annealing yentsimbi engenanto
Gqiba: I-BA, isiQinisekiso esiQhelekileyo
Ifilimu: I-PVC, i-PE, i-PI, i-Laser PVC, i-20um-120um, iphepha elidibeneyo
Ububanzi: 100mm - 1500mm, iimveliso emxinwa pls khangela iimveliso strip
Ukukhanya okuqaqambileyo kunye nokufakwa umbane (BA)
Kwaye ingxubevange yobhedu i-oxidized ngokulula ngexesha lonyango lobushushu. Ukuthintela igcwala kunye nokuphucula umgangatho wobuso bendawo yokusebenza, kufuneka ifakwe emoyeni okhuselayo okanye emoyeni, ekuthiwa kukuhlanjwa okuqaqambileyo. Imimoya ekhuselayo exhaphakileyo isetyenziselwa unyango lobushushu lwealloys zobhedu kunye nobhedu ngumphunga wamanzi, ukubola kweammonia, ukutshiswa okungaphelelanga kunye nokuphelelwa ngamanzi emzimbeni kweammonia, initrogen, ihydrogen eyomileyo kunye negesi engatshiyo (okanye ezinye iigesi ezinokutsha). Unokukhethwa ngohlobo, ukwakheka kunye neemfuno zentsimbi.
Ubhedu olucocekileyo kunye nobhedu olumhlophe aludibaniswanga kumoya obuthathaka, kwaye zikhuselwe ngokufanelekileyo ngumlilo otshisayo one-2% H2 okanye irhasi ene-2% ukuya kwi-5% ye-H2 kunye ne-CO engaphelelanga. Ubhedu oluchanekileyo lunokukhuselwa nangomphunga. Ukuthintela i-hydrogenosis, xa ubhedu oqukethe ioksijini yongezwa, umxholo we-hydrogen kwindawo ekhuselayo akufuneki udlule kwi-3%, okanye unyango lobushushu kwi-micro-oxidizing atmosphere njengoko kuchaziwe apha ngasentla. Ubhedu oluchanekileyo lukwasetyenziswa ngokubanzi xa kufakwa i-vacuum annealing. I-Bronze equlathe ialuminium, i-chromium, i-niobium kunye ne-silicon inokufikelela kwi-annealing eqaqambileyo kuphela kumoya ophantsi kakhulu. Unyango lobushushu (ukuqiniswa okanye ukucinywa) kwebronyllium bronze kuhlala kubola ngokubola kwe-ammonia, kodwa indawo engagqitywanga ye-ammonia akufuneki idlule kwi-20%, kungenjalo kuya kubakho iingxaki zeblue.
I-Brass enomxholo osezantsi we-zinc inokufakwa ngokuqaqambileyo, kodwa ukuhonjiswa okuqaqambileyo kobhedu ngomxholo ongaphezulu kwe-15% akukasonjululwa. Kungenxa yokuba uxinzelelo lokubola lwe-zinc oxide lusezantsi, kwaye i-ZnO inokwenziwa kumoya oqukethe igesi encinci ye-oxidizing, kwaye xa ifudunyezwe ukuya kuma-450 ° C okanye ngaphezulu, i-zinc iqala ukuthambisa nokunyanzela ubhedu. Ukoyisa oku kungalunganga, inokufakwa phantsi kweemeko zoxinzelelo oluphezulu. Umoya okhuselayo osetyenziselwa ubhedu yigesi engacinywanga ngokupheleleyo, i-ammonia, umphunga wamanzi, kunye nezinto ezinje. Umoya okhuselayo kufuneka ungabinasalfure. Indawo yokusebenza kufuneka icocwe ngononophelo ngaphambi konyango lobushushu, kwaye akufuneki kubekho ioyile okanye omnye umdaka ngaphezulu.
I-2B eyahlukeneyo kunye ne-BA
I-BA (i-Bright Annealing) ipleyiti, umahluko ukusuka kwipleyiti ye-2B kukuba inkqubo yokubotshwa yahlukile, i-2B yamkela inkqubo yokudibanisa kunye nokuchola, kunye ne-BA ifakwe phantsi kwe-hydrogen-ekhuselweyo ngaphandle kweoksijini. Inkqubo yokuqengqeleka kunye nenkqubo yokugqibezela imiphezulu emibini nayo yahlukile.
Ibhodi ye-BA ayisetyenziselwa ukuzoba ucingo. Ukuba uza kutsalwa, kungaphezulu kwaye kuyinkcitho.
Ibhodi ye-2B ngokusisiseko ingumgangatho we-mat, kwaye into ayinakubonwa. Ibhodi ye-BA imalunga nesipili kwaye inokukhanyisa ngokucacileyo into (cola kancinci).
Zombini i-2B kunye ne-BA zinokucocwa kwiipaneli zesipili eziyi-8K, kodwa i-2B ifuna amanyathelo angaphezulu okucoca, kwaye i-BA inokufezekisa iziphumo ze-8K ngokuphosa nje kakuhle. Kuxhomekeka kwimveliso yokugqibela, kukho umahluko wokuba i-BA iphosiwe okanye hayi. Ezinye iimveliso ze-BA azidingi kupolishwa kwaye zisetyenziswa ngokuthe ngqo.
Egqithileyo Amashiti angama-430 abandayo aqengqelekayo
Okulandelayo: NO.4 iimakhishithi zentsimbi